Angotrade 26 inch Electric Bike Mountain E-Bike 21 Speed ​​36V 8A Lithium Battery Magetsi Bhasikoro revakuru | ebike Shuangye
musha Blog Angotrade 26 inch Electric Bike Mountain E-Bike 21 Speed ​​36V 8A Lithium Battery Magetsi Bhasikoro revakuru
Angotrade 26 inch Electric Bike Mountain E-Bike 21 Speed ​​36V 8A Lithium Battery Magetsi Bhasikoro revakuru
Zuva ： 2020-09-16 Zvikamu:Blog Views: 1,518 maonero
Angotrade 26 inch Magetsi Bike Mountain E-Bike 21 Pace 36V 8A Lithium Battery Magetsi Bhasikoro reGrownup
(kubva muna Sep 15,2020 20:52:47 UTC - Particulars)
Iwe unoshuvira kuenda kune yekupedzisira ne grocery zviri nyore here?
Iwe unoda here kubvisa kuoma kwekutora bhazi?
Iwe unoshuva kubuda kuti uwane zororo?
Angotrade Magetsi Gomo Bike / Highway Bhasikoro / Vanhurume Bhasikoro / Cyclocross Bhasikoro neLithium-Ion Bhatiri, Nyowani Kugadzira, Vagadziri vatsva, vane hunyanzvi e-bhasikoro vagadziri, vanokuratidzira iwe zvakasiyana zvakasiyana zviitiko !!!
Muviri & Handlebars Zvinhu: Aluminium Alloy
Meter: LED 3-kumhanya inonzwisisika mita bhatani
Chimiro: 26 inch
Mhando dzakasiyana dzekumhanya: 21 Kumhanya
Yakazara Saizi: 165cm / 64.4 inch
Wheel Dhayamita: 64cm / 25 inch
Chigaro Dhizaini: 26 x 17 cm / 10.2 x 6.7 inch
Handlebars Saizi: 68.5cm / 26.7 inch
Lithium Bhatiri Dimension: 8.5 x 8 x 35 cm / 3.1 x 3.3 x 13.8 inch
Kurema kwemotokari: About 20kg
Kurema kweBhatiri: About 2.2kg
Bhatiri Kugona: 36V 8AH
Lithium Bhatiri: 36V
Chaja: Inonzwisisika Lithium bhatiri charger-Inotsemurwa, inogona kupomerwa yega!Kutengesa nguva: 4-6 maawa
Mota: 36V 250W yakanyanyisa velocity brushless giya mota
Kugona kugona: 150kg; Vazhinji velocity: 25-35km / h (US)
Ronga: Bhasikoro reMagetsi
1. Chenjerera kunze kwekuchengetedzwa kwekushandisa.
2. Usaedze uye kuvhura chinongedzo kana bhatiri iri pasimba. Gara kure nemukana wekurovera.
3. Usachinje masystem eparamende kuti ugare kure nematanho kusagadzikana.
1. Chengetedza bhatiri kunze kwekuwana kwevechidiki. Nenzira yekuyedza kuvhura bhatiri.
2. Kana bhatiri rakatyoka nekuda kwaro rakadonhedzwa kune imwe nzvimbo kana nekuda kwetsaona yebhasikoro, panogona kuve nenjodzi yekudonha kwemagetsi. Chenjerera kutsva kwemakemikari! Uye ipapo rega kurega kushandisa yakaputsika bhatiri.
3. Usabate bhatiri uine kunze kwezvinhu kana magirovhosi uye uone kuti hapana acid inobata maziso ako.
Tenga zvinhu izvi nechivimbo. Kana paine chero mamiriro acho nawo, usazeze kutibata isu, uye isu tinopindura tozvigadzirisa mukati maawa makumi maviri nemana.
【MITATU YOKWEDZA MOTA】 Gomo E-bhasikoro & Bhasikoro rakabatsirwa, iwe uchave unokwanisa kusarudza nzira yaunoda.Appropriate yevatasvi vari pakati pe165-190cm. Germany mota hunyanzvi inogona kuwana 21-250km / h 25-35mph. Kunaka kukwira kugona
【LARGE-CAPACITY LITHIUM BATTERY】 36V / 8AH li bhatiri inobatsira 25km / 15.5mile (E-Bike Mode) kuenda ku50km / 31mile (Assured Mode) kubvisa. Yakashongedzwa zvine musoro lithiamu bhatiri charger yekukurumidza kuchaja (4-6 hrs).
【INDUSTRY ALUMINUM ALLOY FRAME】 Gomo remagetsi bhasikoro rinoita rakareruka-huremu aluminium zvinhu-mwenje uye yakasimba.Anti ngura inopenda bhasikoro muviri. 3-kumhanya Meter ine 3-kumhanya inonzwisisika mita bhatani
【ULTRA AKASIMBIRA MAVHIKI】 26 inch bead akataura mavhiri akagadzirwa kubva kualuminium alloy uye anti-slip kuisa pane isingagadzi gobvu tai. Swimsuit yeWet chando chemakomo nzira uye nzira yemugwagwa
[Guarantee]: Tenga zvinhu izvi nechivimbo. Kana paine chero mamiriro acho nawo, usazeze kutibata isu, uye isu tinopindura tozvigadzirisa mukati maawa makumi maviri nemana. Kugutsikana kwako ndiko kutanga kwedu kwekutanga.
Prev: A 1970s Race In Marin Yakatangwa Iyo National Mountain Biking Trend
Next: Vhidhiyo: Nyowani Ubisoft Vhidhiyo Game Inokutendera Iwe Kutasva Red Bull Rampage